GNOME: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19? | Avy amin'ny Linux
GNOME: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Toy ny mahazatra dia miresaka momba ny vaovao farany avy matetika izahay GNOME (3.36, 3,34, 3.32, 3.30, ankoatry ny hafa), ny fanitarana na momba ny sasany endri-javatra o fampiharana natiora indrindra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka manokana amin'ny Inona ny atao hoe GNOME? y Ahoana ny fametrahana GNOME?. Ary mazava ho azy, mifantoka amin'ny ankehitriny Metadistribution (fizarana reny) DEBIAN GNU / Linux, izay amin'izao fotoana izao ny Dikan 10, anarana kaody Buster. Ilay mitovy amin'izao no fototry ny MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina).
GNOME dia iray amin'ireo maro hafa Tontolo Desktop (DE) izay manao fiainana eo aminy Rafitra miasa GNU / Linux. Ary amin'ny fizarana maro ankehitriny dia efa nisy izy io na tsia Tontolo iainana Desktop default (default)
Tsara ny mahatadidy izany, a Tontolo iainana Desktop es:
"… Andiana rindrambaiko hanoloran'ny mpampiasa solosaina fifandraisana akaiky sy mahafinaritra. Izy io dia fampiharana ny Graphical User Interface izay manolotra fidirana sy toeram-pandaminana, toy ny baraovola sy fampidirana ireo rindrambaiko manana fahaiza-manao toy ny drag and drop.". Wikipedia
Ary iray Interface ho an'ny mpampiasa sary (GUI) es:
"… Fandaharana solosaina izay miasa ho toy ny mpamatsy mpampiasa, mampiasa andiana sary sy zavatra misy sary hanehoana ny fampahalalana sy ny hetsika hita ao amin'ilay interface. Ny tena fampiasana azy dia ny fanomezana tontolo ara-maso tsotra ahafahana mifampiresaka amin'ny Operating System an'ny masinina na solosaina". Wikipedia
1 Ny momba ny GNOME rehetra
Ny momba ny GNOME rehetra
Navoaka tamin'ny datin'ny Diaben'ny 3 tamin'ny 1999 ary amin'izao fotoana izao dia a Tontolo iainana Desktop natao hohajaina mora foana sy kanto na amin'inona na amin'inona Fitsinjarana GNU / Linux apetraka amin'ny Solosaina, izany hoe hanamorana ny fampiasana sy ny fifehezana ny asa rehetra, ny endri-javatra sy ny rindranasa misy azy, sy ireo hafa manodidina azy Operating System. Na amin'ny teny hafa, manomeza fahatsorana, fanamorana ny fidirana ary fahamendrehana ho an'ireo mpampiasa.
Ny anaranao (GNOME) is acronym for "GNU Network Object Model tontolo iainana". Madio tanteraka izy io Rindrambaiko maimaim-poana sy loharano misokatra (Free sy Open Source Software - FOSS).
Ampahany amin'ny Tetikasa GNOME miankina amin'ny Fototra GNOME. Ary miorina amin'ny toolkit izy io GTK +.
Azo namboarina izy io ary mampiasa ny Mpizara fampisehoana X Window System, na dia manatsara ny fampidirany azy izao Wayland ary manatsara ny fisongadinana toy ny kinetika scrolling, drag and drop, ary ny kitendry afovoany
Anisan'ireo toetra mampiavaka azy ankehitriny ny Bokotra hanombohana ary ny azy Main menu ny fampiharana sy ny safidy. izy Bokotra hanombohana izany no antsoina "fiaraha-mientana" ary miorina amin'ny toerana misy anao eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery ary mamela anao hifindra eo amin'ny sehatr'asa sy ny varavarankely. Ary ny fisehoany sy ny fikirakirany ankehitriny dia aseho amin'ny sary eo ambony eo noho eo.
Ny kinova tsy miovaova ankehitriny an'ny Tontolo iainana Desktop GNOME dia laharana kinova 3.34.
Ekipa miasa tsara sy fanohanan'ny fikambanana matanjaka.
Vondron'olona mpampiasa sy mpandray anjara lehibe.
Làlan'ny tantara lava sy tsara.
Antontan-taratasy ampy sy feno.
Ekosistra lehibe an'ny fampiharana.
Ny kinova ankehitriny (GNOME 3) dia mandany loharano (RAM / CPU) be dia be raha oharina amin'ny ankamaroany.
Mifamatotra mafy amin'ny fampiasana Systemd.
Inona no vaovao amin'ny kinova miova farany ho an'ny mpampiasa
Inona no vaovao amin'ny famoahana maharitra farany ho an'ny mpamorona
Tranonkala DEBIAN ao amin'ny GNOME
Safidio ny Tontolo iainana Desktop GNOME ary ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Famerenana indray ary fidio amin'ny fisafidianana ny Tontolo iainana Desktop GNOME, raha toa ka manana mihoatra ny iray Tontolo iainana Desktop napetraka ary tsy nifidy ny GDM3 Login Manager.
Fanamarihana: Taorian'ny fitsapana ny Tontolo iainana Desktop GNOME napetraka dia azonao atao ny mametraka ny fampiharana fanampiny zanatany sy plugins ilaina ny mitovy amin'izany, ohatra,:
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entorno de Escritorio» fantatra amin'ny anarana hoe «GNOME», iray amin'ireo be mpampiasa indrindra eto amin'izao tontolo izao «Distribuciones GNU/Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GNOME: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Toa monographe Gnome kokoa io fa tsy boky torolàlana fametrahana.
Ny Gnome dia biraon'ny default ao Debian, ary izy io dia mora foana.
Ny olana lehibe mety hitranga amin'ny mpampiasa vaovao dia ny ilàn'izy ireo rindrambaiko tsy andoavam-bola, izay holazaina ao amin'ny installer raha hampidina ivelany.
Miarahaba anao Autopilot! Misaotra tamin'ny hevitrao. Mazava ho azy fa na dia somary madinidinika aza ilay lahatsoratra, dia feno ihany izany ka izany dia teboka fanombohana tsara ho an'ireo izay avy amin'ny rangotra ao amin'ny Linux sy ny tontolony Desktop, ary amin'ity tranga ity, GNOME Ary koa, izy no voalohany amin'ny andiany iray momba ny tontolon'ny Desktop GNU / Linux rehetra. Hamoaka ny iray ho an'ny KDE / Plasma tsy ho ela isika.
Ny kinova vaovao amin'ny Linux Kernel 5.5 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Tanisao ny kinova Solus 4.1 vaovao miaraka amin'i Kernel 5.4 sy maro hafa